Iindaba -I-Zouping Mingxing Chemical iqhubela phambili kwisityalo seekhemikhali zedijithali
Iincasa kunye namafutha
I-Zouping Mingxing Chemical iqhubela phambili kwisityalo seekhemikhali zedijithali
Umgca wemveliso esizisebenzelayo ophambi kwethu ngumgangatho wemveliso ekrelekrele owenziwe waphuculwa kwaye waguqulwa yiZouping Mingxing Chemical Co., Ltd. ngotyalo-mali lwe-yuan yezigidi ezili-100 kulo nyaka. Okwangoku, iimveliso zeekhemikhali zifakwe kwimveliso kwiibhetshi. Ngokutsho komphathi jikelele wenkampani, "kuvavanyo olukhulu" lwesimo sobhubhane, inkampani ngempumelelo "yathatha uviwo" ixhomekeke kubuchwepheshe obutsha, kwaye umgca wemveliso okrelekrele uzise nemibono emitsha kuphuhliso lwamashishini. Kulo nyaka, inkampani iya kugxila kuphuhliso lweemveliso ezintsha ezinomxholo wobuchwephesha obuphezulu kunye nexabiso elongezwe phezulu, kwaye izabalazele ukwakha iklasi yokuqala kunye nesiseko semveliso esikhokelela kumazwe aphesheya.
Ukuchaphazeleka kwimeko yobhubhane, akukho lula ukufezekisa injongo enjalo, kodwa iinkokheli zenkampani zizele ukuzithemba: "ngokukhokelwa kubukrelekrele bemizi-mveliso, ukukhawulezisa inguqu kunye nokuphucula, kunye nokukhuthaza ukuguqulwa kwenkampani kwimveli ukuvelisa imveliso enexabiso eliphezulu. ”
Ukongeza ekukhawuleziseni utshintsho kumgca ophambili, iZouping Mingxing Chemical Co, Ltd. ikwakhawulezisa umngcelele wayo usiya kumzi mveliso weekhemikhali zedijithali. Iceba ukuqonda ukusebenza koomatshini okrelekrele ukusuka ekubambeni kwemathiriyeli eluhlaza kunye nobunzima ekubambeni imveliso, ingqokelela kunye nokufunyanwa kwesiphene. "Ngale ndlela, inani labasebenzi abasetyenzisiweyo lincitshisiwe ngama-32%, kodwa imveliso yokusebenza kamasifundisane iphindwe kabini.".
Ukuba sifuna ukuphumelela imakethi yasekhaya, kufuneka siphume siye kwilizwe. Okwangoku, iZouping Mingxing Chemical Co., Ltd. ikhawulezisa ukutsiba ukusuka "kwimveliso ejolise kwimveliso" ukuya "kwimveliso ejolise kwinkonzo", iqhubeka ngakumbi nokwenza umahluko kunye nokwandisa isabelo sayo sentengiso. Kwikota yokuqala yalo nyaka, iyonke i-US $ 30 yezigidi yotshintshiselwano lwangaphandle yaveliswa kuthunyelwe kumazwe angaphandle, kunye nonyuso lonyaka nonyaka lwe-30%. Siza kuzama ukufumana i-100 yezigidi zeedola zaseMelika ngokuthumela ngaphandle kulo nyaka uphela.
Ixesha lokuposa: Jan-11-2021
IDaixi 3 Road, iZouping County kwiPhondo laseShandong, China